Peeji iji nye ego na ntanetị, ị na-achọ onye na-enye ego ego? | Akụkọ akụrụngwa
Na-achọ peeji iji mee ego? Nwetụla mgbe ịchọrọ ịgba ọsọ na enweghị obere mpempe akwụkwọ n'aka? Nke a na ọnọdụ ole na ole ndị ọzọ nwere ike ịdakwasị anyị n'oge ọ bụla, "obere mpempe akwụkwọ a" bụ ihe dị mkpa ebe anyị ga-etinye aha ndị dị iche iche nwere ike isonye na raffle iji nweta ihe nrite.
Maka ụdị ikpe a, anyị na-akwado iji ngwa weebụ na-atọ ụtọ, nke nwere aha Flucky na nke kama nke obere nnyapade ndetu, ị ga-eji ole na ole yi kpọọ ebe anyi ga-ede aha ndi sonyere na ya. Na njedebe ọ bụ enye onyinye generator nke anyị nwere ike iji mee aha na-adọta ngwa ngwa na ọsọsọ.
1 Etu esi ahazi ihe esere na roulette na ntanetị na Flucky
1.1 Kedu otu na ihe kpatara ịme aha aha
2 Peeji nke inye ego
2.1 Bịaruo 2
2.3 Juo ya na ihu oma
Etu esi ahazi ihe esere na roulette na ntanetị na Flucky
Mbụ ị ga-gaba kwupụta Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Flucky, na-achọta gị na nke mbụ ya na interface dị ọcha kpamkpam. N'akụkụ aka nri nke windo nchọgharị ị ga-ahụ obere ọkà okwu, nke ị nwere ike ogbi ma ọ bụrụ na egwu dị n'okirikiri na-emesi gị ike. Na-esote akara ngosi a nwere obere nke ọzọ n'ụdị nke «i», nke na-anwa ịnye ụfọdụ ozi gbasara otu ị ga-esi jiri obere ngwa ọrụ a, ihe na-agaghị adị mkpa n'ihi na anyị ga-elekọta ya n'oge a .
N'okpuru ihuenyo nnabata enwere obere bọtịnụ na-ekwu «Malite«, Nke ị ga-pịa ka egwuregwu ahụ wee malite ozugbo.
Site na ịpị obere bọtịnụ a, Flucky interface na windo ihe nchọgharị ga-agbanwe ntakịrị, dịka a ga-agbakwunye sidebar n'akụkụ aka ekpe. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ obere ubi nwere ozi ahụ «Tinye onye» (ọ bụ ezie na Bekee) tinyere bọtịnụ uhie na akara "+". N'ebe a, ị ga-etinyerịrị aha nke ọ bụla n'ime ndị ahụ wee pịa igodo «Tinye» ma ọ bụ naanị họrọ bọtịnụ ọbara ọbara (ya na akara «+»)
Ozugbo aha ị debere ga-apụta na ala nke otu akụkụ ahụ, mana ya na otu agba. N'akụkụ aka nri, kama, okirikiri ga-apụta, nke na-adị n'ezie obere mebere roulette. Nwere ike ịgbakwunye ọtụtụ aha dị ka ịchọrọ na mmanya ahụ n'akụkụ aka ekpe, dabere na ọnụọgụ ndị so na ya ga-abụ akụkụ nke ihe osise a na roulette.
Ka e were ya na ị gbakwụnyere aha 10, ha niile ga-apụta n’aka ekpe n’elu igbe nwere ụcha a kapịrị ọnụ; n'akụkụ aka nri kama (okirikiri) roulette ga-apụta kewara n'ime ngalaba 10, onye ọ bụla nwere ụcha dị iche. Akụkụ egwuregwu a dị mfe ịchọpụta, ebe ọ bụ na agba ọ bụla achọtara na wiil ahụ ga-abụ aha ọ bụla dị n'akụkụ aka ekpe.
Ozugbo anyị kọwapụtara aha ndị niile sonyere, ugbu a naanị anyị ga - ahọrọ bọtịnụ na ala nke na - ekwu «Go«, Ya mere, na mmanya na aha ga-apụ n'anya ozugbo. N'oge ahụ aka ga-apụta nke ga-anwa ịgbagharị wiilị a.
Dị ka a ga - asị na anyị nọ n’ihu ezigbo roulette, anyị ga - echere onye mebere nke a nke Flucky ka ọ kwụsị na agba dị iche; mgbe nke a mere na etiti windo aha onye mmeri ga-apụta, otu ihe ahụ ga-abụ nke agba ebe roulette a kwụsịrị.
Flucky bụ ngwa weebụ na-atọ ụtọ nke anyị nwere ike iji oge ezumike na ndị enyi na ezinụlọ, na-enwe ike ịnye ụdị ihe ọ bụla anyị nwere na ọbụlagodi, mee ka roulette a bụrụ onye na-ekpebi onye ga-eme ụdị nchegharị. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ngwa weebụ a dabere naanị na ihe nchọgharị Internetntanetị, anyị nwere ike ịgba ya na ụdị ikpo okwu ọ bụla, ya bụ, na Windows, Linux ma ọ bụ Mac.
Kedu otu na ihe kpatara ịme aha aha
N'oge ị na-eduzi raffle, dabere na mkpa ọ dị, ọ ga-abụ na ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ itinye ngwa ma ọ bụ ọrụ weebụ nke na-enye anyị ohere ịme ụdị raffle a n'amaghị na-aga akwụkwọ na a igbe nwere aha ndị sonyere na ike ọka iwu ata ahụhụ ụfọdụ tongo.
Onyinye ego abụrụla ezigbo ngwaọrụ mgbe anyị chọrọ mee ka a mara anyị na netwọkụ mmekọrịta, ọkachasị mgbe anyị mepụtara azụmaahịa ma anyị chọrọ ịmalite mechaa ndị ahịa anyị. Tụkwasị na nke a, ọhụụ n'etiti ndị na-eso ụzọ anyị ga-abawanye ka anyị na-ebu ụfụfụ, ebe otu n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu chọrọ ka anyị gbakwunye bụ na a ga-ekerịta ya na netwọkụ mmekọrịta nke onye ọrụ ka ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ azụmahịa anyị wee ruo ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị mmadụ kwere omume.
Ọ dabara nke ọma na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na ọrụ ndị na-enye anyị ohere ịme ha. Dịka iwu n'ozuzu, ọrụ ha niile dị mfe, ebe ọ bụ na ọ dabere na ụdị nke anyị họọrọ, naanị anyị ga-eme ya tinye aha ndi niile sonyere maka ihe osise ịmalite.
Peeji nke inye ego
Bịaruo 2 na-enye anyị ohere ịbanye ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere na nke ga-abụ akụkụ nke raffle na ọnụ ọgụgụ nke ihe nrite anyị chọrọ ịme. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ị nweta ihe nrite atọ n'etiti mmadụ iri, ngwa a ga-egosi anyị naanị aha mmadụ atọ ndị nwere ihu ọma iji merie ha. Nwere ike Ekekọrịta nsonaazụ ya site na Facebook, WhatsApp ma ọ bụ bipụta ha na weebụsaịtị anyị site na koodu HTML nke na-enye anyị nsonaazụ. Ofdị ịkpụ a bụ n'efu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inye nghọta na eserese ahụ, Sortea2 na-enye anyị nhọrọ ahụ maka euro 2,99.
Weebụsaịtị a bụ nke na - enye ihe kachasị mma na ọtụtụ nhọrọ mgbe ọ na - eduzi raffles. Na Randorium anyị nwere ike iji akwụkwọ ozi na-agba ọsọ site na ndepụta nke ndị sonyere, site na otu ma ọ bụ site na ọnụọgụ ọnụọgụ. Onye ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ na-enye anyị ohere ịgbakwunye onyogho iji hazie ya, ọnụọgụ nke ndị sonyere, ọnụọgụ kacha nta nke ndị sonyere na ọnụ ahịa ọnụ ahịa iji kesaa. Anyị ga-agbakwunye nkọwa kachasị nke mkpụrụedemede 400 nke ihe anyị na-eme na ntọala nke otu na ụbọchị a ga-eme ya.
Anyị nwekwara ike ịtọ ụbọchị na oge ihe osise ga-eme. Ozugbo anyị gbakwunyechara data niile kwekọrọ na ihe osise anyị ga-ebu, pịa na-ebipụta eserese ahụ. Ibe weebụ ga-egosi anyị koodu HTML iji tinye na ibe weebụ anyị. Anyị nwekwara ike kekọrịta ya na netwọkụ mmekọrịta ka ndị mmadụ sonye.
Juo ya na ihu oma
Peeji a na-enye anyị ohere ịme ntughari dị mfe, yana aha ndị sonyere, hazie asọmpi na ihe nrite, tụda mkpụrụ ego iji hụ onye mmeri bụ, bulie kaadị, tụgharịa dice ... N'etiti nhọrọ raffle ọ na-enye anyị Juo ya na ihu oma, anyị nwere ike ịtọ ya ka ọ nọrọ naanị, n’etiti ndị sonyere n’ihu kọmputa ma ọ bụ ọ dị mma biputere ya na ibe facebook anyị. Ọ bụ eziokwu na nhọrọ ị ga-eji rụọ ụdị dị iche iche dị iche iche, ma mma ị ga-ahụ na nsonaazụ ọ na-enye anyị dị ezigbo nso.
Ngwaọrụ a bụ ihe ọzọ zuru oke anyị nwere ike ịchọta na ịntanetị, ebe ọ na-enye anyị ohere ịmepụta asọmpi maka vidiyo, foto, akụkọ yana ikwe ka anyị jikọta ha na Twitter, Facebook na Vimeo n'etiti ndị ọzọ. Okpukpo Ọ bụ n'efu ma ọ bụrụ na ịnweghị karịa ndị na-eso 300, yabụ, ọ bụ ezigbo ngwaọrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme akara anyị ma nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ.
Agorapulse bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta iji kwado netwọkụ mmekọrịta anyị site na imepụta raffles na asọmpi. Ọrụ a na-enye anyị ọnụ ọgụgụ na ezigbo oge na mgbakwunye ikwe ka anyị kesaa nsonaazụ ya na ezigbo oge yana esere ndị yiri ya iji lelee mmetụta ha na-enwe n'oge niile. Ọrụ ndị dị na ịme ndagwurugwu na Facebook na Twitter nwere ọnụahịa dị oke ọnụ, yabụ anyị nwere ike ịmalite iji ya na-enweghị itinye ego nnukwu ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nyefee generator
Marcos Chourio kwuru dijo
Enwere m mmasị na ya, ọ bụ naanị ihe m na-achọ, mana mgbe m nyere RESTART ihe niile na-ehichapụ ma m ga-amalite site na ọkọ, enweghị m ike ịga n'ihu na-egwu ... ma ọ bụ roulette ibudata ma ọ bụ mejuputa na koodu? Daalụ!
Zaghachi Marcos Chourio
Ekwenyere m na okwu gara aga. Ọ bụrụhaala na mmadụ edoghị ya anya, O nwere nanị otu e si eji ya eme ihe. Mgbe ahụ ịpị Malitegharịa ekwentị kpochapụrụ ihe niile wee bido. A ọmịiko na ọ naghị enye ndị ọzọ Olee nhọrọ.
ebe o kwuru "keere" ị ga - edetu url niile na mado na ihe nchọgharị ọ ga - apụta dịka ọ dị, ịmalite inye onyinye ọhụrụ, ihe ịga nke ọma
Nnọọ, Achọrọ m ịma ọnụọgụ kachasị nke ndị so na Fluky na-akwado. M ga-eme nzacha na Facebook ma amaghị m mmadụ ole ga-eso. Daalụ
Nokia 8 dị ugbu a maka ndoputa na Spain